Wararka Maanta: Axad, Nov 21, 2021-Puntland oo xukun dil ah ku riday labo kamid ah Shabaabkii weeraray xabsiga Boosaaso
Labadan nin oo lagu kala magacaabo Maxamuud Cabdirixiin Cabduqaadir Xifdiye iyo Maxamed Cismaan Madey Cismaan ayay maxkamaddu sheegtay in ay askar ku laayeen intii uu socday weerarkii ay kusoo qaadeen xabsiga Bosaso.
Xukumayaasha oo maxkamadda ka hadlay ayaa qirtay in ay kamid ahaayeen Alshabaab iyo guutadii loosoo diray in ay xabsiga, balse waxay ku andacoodeen in aanay ka qeyb qaadan weerarka xabsiga.
Guddoomiyaha maxkamadda gaashaanle dhexe Cabdirisaaq Jaamac Cabdulle, ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee eedeysanayaasha lagu riday. Sidoo kale wuxuu sheegay in ay maxkamaddu siisay racfaan bil ah, oo ay isaga difaacaan xukunka lagu riday.
Raggan xukunka lagu riday waxay qeyb ka ahaayeen rag katirsan Alshabaab oo gacanta lagusoo dhigay saacaddo kadib weerarka xabsiga, waxaa lagu soo qabtay howlgal ciiddanku kaga daba tagayeen dableydii xabsiga weerartay iyo maxaabiistii fakatay.